Antsirabe : tanora 32 nahazo fiofanana « Dual » | NewsMada
Natolotra ny talata 9 febroary teo, teto Antsirabe, ny mari-pahalalana ho an’ireo 32 mianadahy niofana momba ny asa, ao anatin’ilay antsoina hoe « Dual ». Nahatanterahana izany ny Antenimieran’ny varotra sy ny indostria (CCI) Vakinankaratra. Afaka manaraka azy ny tanora manana bakalorea, ary afaka manao ny asa « assistant bancaire », teknisianina ara-barotra, technique de secretariat, informatika, mekanika elektronika, sns.
Maharitra 20 volana ny fiofanana, atao indroa miantoana, ka fampiharana avokoa ny 80% ary 20% ihany ny fianarana an-dakilasy. Mahazo mari-pahalalana avy hatrany ny mpiofana raha vao mahavita ny 10 volana voalohany, ahafahana manohy ny andiany faharoa. Mahazo ny Diplaoma ho an’ny teknisianina ambony (DTS) izy ireo aorian’ny fiofanana ary efa anjatony ny nahazo izany tamin’ity fiofanana Dual ity.
Nanatrika ny fotoana teto Antsirabe ny lehiben’ny faritra Vakinankaratra, Andrianjanaka Mandrindra Albert, sady filohan’ny CCI Antsirabe rahateo. Manohana ity fiofanana ity koa ny Caisse d’epargne Antsirabe, ny banky sy ny mikraofinansa.